Bhuku raSteve Jobs, mwenje nemimvuri yehunyanzvi | IPhone nhau
Bhuku raSteve Jobs, mwenje nemimvuri yehunyanzvi
Kubva parufu rwaSteve Jobs munaGumiguru 2011, vazhinji vanga vari vanyori nevatori venhau vanga vachida kutora mukana kudhonza kwaive nezita rayo mukati mekambani yehunyanzvi. Asi kwete vanyori chete asiwo indasitiri yeHollywood yanga ichida kuita mari nehupenyu hwaSteve Jobs.
Yekutanga kuyedza yaive iyo firimu "Mabasa" inotarisa Asthon Kutcher uye ine chinyorwa chakanyorwa neasingazivikanwe Matt Whiteley. Iyo yechipiri firimu rakaburitswa mavhiki mashoma apfuura muUnited States uye iro rakabviswa kubva kumazhinji mabhaisikopo «Steve Jobs» nyeredzi Michael Fassbender uye Kubva pane zvakanyorwa naAaron Sorokin, munyori weiyo yepamutemo Jobs biography.
Bhuku raSteve Jobs, rakanyorwa naBrent Schlender naRick Tetzeli anoda kusvika ive yakasarudzika biography pahupenyu hwaSteve Jobs. Iri bhuku rinoratidzira mapoinzi akanaka uye asina kunaka echimiro chake pasina kuenda kunongedza chete zvinokakavara zvemunhu wake, senge hunhu hwakasimba hwakamupa mukurumbira wekuve munhu akanyanyisa kusanyanyisa uye anonyanya kuda kuita zvakakwana, kunyangwe aine zvidiki diki.
Brent Schlendre aive mukati kusangana naSteve Jobs kuburikidza nehurukuro dzakasiyana dzaakaitisa yeWall Street Journal, Kwemakore makumi maviri neshanu apfuura, kubvira Jobs payakatangira Inotevera, nepo Rick Tetzeli anga ari director edhisheni yeFast Company yakatsaurirwa kuongororwa kwehunyanzvi kweanopfuura makumi maviri emakore, pamwe nemupepeti weFortune magazini neKuvaraidza Vhiki.
Pfungwa yekunyora bhuku iri yakakurudzirwa na iyo chinangwa chekupa chaiyo chaiyo yekuona pane hupenyu hwaSteve Jobs, uko isingagumirwe chete kurumbidza kana kushoropodza chimiro cheMabasa asi kuyedza kuve nechinangwa sezvinobvira. Iri bhuku parizvino riri nhamba yekutanga pane iyo New York Times Bestsellers runyorwa.
Heano mamwe maonero akakodzera nezvebhuku rino:
"Ndinovimba bhuku iri rinozivikanwa seyakajeka biography yaSteve Jobs"
Ed Catmull, Mutungamiri weDisney Mhuka uye Pstrong
«Bhuku raSteve Jobs rinotarisa pane zvakakosha ...
Akapinza, anonzwisisa uye anoburitsa pachena.
Jim Collins, munyori weGood uye Great, co-munyori we Yakavakirwa Kupedzisira uye Hukuru nekusarudza
“Takasarudza kutora chikamu mubhuku raBrent Schlender naRick Tetzeli nekuda kwehukama hwakareba hwaBrent naSteve, izvo zvakamupa maonero akasarudzika pahupenyu hwake. Iri bhuku rinoratidza Steve zviri nani kupfuura chero chinhu chipi zvacho chatakaona; ndosaka tichifara kuti takabatanidzwa. "
Steve Dowling, mutauri weApple
Iri bhuku rinowanikwa paMalpaso imba yekutsikisa uye inotengwa pa19,50 euros.
Tenga - Steve Jobs bhuku
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Bhuku raSteve Jobs, mwenje nemimvuri yehunyanzvi
Stevie Wonder ajoina Apple kuzotikorokotedza paKisimusi